Ifilosofi yamaGrike i-Anaximander Yenza Iminikelo ebalulekileyo kwiJografi
U-Anaximander wayengumfilosofi ongumGrike owayenomdla omkhulu kwi- cosmology kunye nombono ochanekileyo wehlabathi (i-Encyclopedia Britannica). Nangona ubuncinci malunga nobomi bakhe nehlabathi kwaziwa namhlanje ukuba wayengomnye wezafilosofi zokuqala ukubhalela izifundo zakhe kwaye wayengummeli wezesayensi kwaye uzama ukuqonda isakhiwo kunye nentlangano yehlabathi. Ngaloo ndlela wenza igalelo elininzi kwi-geography yokuqala kunye nebalazwe kunye kwaye ukholelwa ukuba uye wadala imephu yokuqala yehlabathi epapashwe.
U-Anaximander wazalwa ngo-610 BCE eMilto (iTurkey namhlanje). Akukho nto eyaziwayo ngobomi bakhe bokuqala kodwa ukholelwa ukuba wayengumfundi wefilosofi ongumGrike uThales waseMiletus (i-Encyclopedia Britannica). Ngexesha lokufunda kwakhe u-Anaximander wabhala malunga neenkwenkwezi, i-geography kunye nobume kunye nentlangano yehlabathi elikujikelezile.
Ngomhla nje inxalenye encinane yomsebenzi ka-Anaximander usaphila kwaye ininzi yento eyaziwayo ngomsebenzi wakhe nobomi isekelwe kwizixhobo zokuhlaziya kunye nezishwankathelo ngababhali bamaGrike kunye nabafilosofi. Umzekelo kwi-1 okanye ngowama-2 ye-CE CE uAetius waqulunqa umsebenzi wezafilosofi zakuqala. Umsebenzi wakhe kamva walandelwa nguHippolytus kwi-3 leminyaka kunye ne-Simplicius kwi-6 th century (Encyclopedia Britannica). Nangona kunjalo, abaphengululi beengcali zikholelwa ukuba uArisotle kunye nomfundi wakhe uTheophrastus baxanduva kakhulu malunga no-Anaximander kunye nomsebenzi wakhe namhlanje (i-European Graduate School).
Izishwankathelo zabo kunye nokuhlaziywa kwemiboniso kubonisa ukuba u-Anaximander noThales baqulunqa iSikole saseMilesian yeScience-Socros. U-Anaximander ukwaziswa ngokuqulunqa i-gnomon kwi-sundial kwaye wayekholelwa kumgaqo owodwa owawusekelwe kuyo yonke indawo (Gill).
U-Anaximander waziwa ngokubhala imbongo yefilosofi ebizwa nge- On Nature kwaye namhlanje kuphela isahluko esikhona (i-European Graduate School).
Kukholelwa ukuba ezininzi zishwankathelo kunye nokulungiswa komsebenzi wakhe zisekelwe kulo mbongo. Kwimbongo uAnaximander ichaza inkqubo elawulayo elawula ihlabathi kunye nezulu. Ukwachaza ukuba kukho umgaqo ongapheliyo kunye nesakhiwo esenza isiseko sombutho wehlabathi (i-European Graduate School). Ukongeza kwezi ngcamango u-Anaximander kunye neengqungquthela ezintsha zeenkwenkwezi kwi-astronomy, biology, geography kunye nejometri.
Iminikelo yeJografi kunye neCrographic
Ngenxa yokugxininisa kwintlangano yehlabathi ubuninzi bomsebenzi ka-Anaximander waba negalelo elikhulu ekuphuhliseni i-geography yokuqala kunye nebalazwe. Uzuzwa ngokuyila imephu yokuqala epapashwe (eyayibuyiselwa kwakhona nguHecataeus) kwaye mhlawumbi uye wakha enye yehlabathi yokuqala yehlabathi (i-Encyclopedia Britannica).
Imephu ka-Anaximander, nangona ingazange ichazwe, yayibalulekile kuba yinto yokuqala yokuzama ukubonisa lonke ihlabathi, okanye ubuncinane isabelo esaziwayo kumaGrike asendulo ngexesha. Kukholelwa ukuba u-Anaximander wadala le mephu ngezizathu ezininzi. Enye yayo yayikuphucula ukuhamba phakathi kwamakoloni aseMileto nakwezinye iikoloni ezijikeleze iMeditera kunye noLwandle oluMnyama (i-Wikipedia.org).
Esinye isizathu sokudala imephu kukubonisa umhlaba owaziwayo kwezinye iikoloni ngenzame yokwenza ukuba bafune ukujoyina i-Ionian city-states (Wikipedia.org). Ukugqibela okubhekiselelwe ekudaleni imephu kukuba u-Anaximander wayefuna ukubonisa ukubonakaliswa kwehlabathi jikelele eyaziwayo ukunyusa ulwazi ngaye kunye noontanga bakhe.
U-Anaximander wayekholelwa ukuba inxalenye ehleliweyo yomhlaba yayicwebile kwaye yayenziwe yinto ephezulu yesilinda (i-Encyclopedia Britannica). Wabuye wathi indawo yehlabathi ayinakuncedwa yinto na kwaye yahlala isendaweni ngenxa yokuba yayingumlingani kuzo zonke ezinye izinto (i-Encyclopedia Britannica).
Ezinye iingcamango kunye neempumelelo
Ukongeza kwisakhiwo seMhlaba ngokwawo u-Anaximander wayenomdla kwisakhiwo se-cosmos, imvelaphi yehlabathi kunye nokuziphendukela kwemvelo.
Wayekholelwa ukuba ilanga nenyanga kwakuyizindandatho ezingenamlilo ezizaliswe ngomlilo. Amakhonkco ngoAnaximander ayenamaphiko okanye imigodi ukuze umlilo ukhanye. Iindidi ezahlukileyo zenyanga kunye nezilwanyana zazibangelwa ukuvalwa kwevents.
Ukuzama ukuchaza imvelaphi yehlabathi uAnaximander waba nombono wokuthi yonke into evela kwi-pepe (engapheliyo okanye engapheliyo) endaweni yezinto ezithile (i-Encyclopedia Britannica). Wayekholelwa ukuba ukunyuka kunye nentsimbi ye-api yayiyimvelaphi yehlabathi kunye nokunyuswa kwabangelwa into echaseneyo njengomhlaba oshisayo okanye obandayo okanye omanzi kunye owomileyo, ngokukodwa ukuhlukaniswa (i-Encyclopedia Britannica). Kwakhona wayekholelwa ukuba ihlabathi aliyilo elingunaphakade kwaye ekugqibeleni liyonakaliswa ukuze ihlabathi elitsha liqale.
Ukongeza kwienkolelo zakhe, uAnaximander wayekholelwa ekuziphendukeleni kwemvelo kwizinto eziphilayo zehlabathi. Izidalwa zokuqala zehlabathi zathi zivela ku-evaporation kwaye abantu bevela kwelinye uhlobo lwesilwanyana (i-Encyclopedia Britannica).
Nangona umsebenzi wakhe wabuya uhlaziywa ngamanye amafilosofi kunye nososayensi ukuba bachaneke ngakumbi, imibhalo ka-Anaximander yayibaluleke kakhulu ekuphuhliseni i-geography yokuqala, imidwebo yemifanekiso , i-astronomy kunye nezinye iindawo kuba zimelele enye yezinto zokuqala zokuzama ukuchazela ihlabathi kunye nesakhiwo / umbutho wayo .
U-Anaximander wafa ngo-546 BCE eMilto. Ukuze ufunde kabanzi malunga no-Anaximander vakashela i-Internet Encyclopedia yefilosofi.
Indlela yokuthenga iRC Toys kwi-6-Old-Olds Olds
Indlela iDyslexia ifuthe njani ukubhala izakhono
UJulian waseNorwich Quotes: Ukususela kwiNgesi ye-Mystic
AbaFakeli abaPhezulu kunye neNgxowa-mali
13 Iimpawu Zonke Ngokuphathelele 'Inkwenkwezi Nenhle' Inkwenkwezi uKarla Mosley
I-Betsuni - Iimpawu ezilula zaseJapane
Umgwaqo ongabikho kunye noKhuseleko lokuSebenza
Ukunqoba umntu weGemini
Imbali emfutshane yeSão Tomé nePríncipe